कोरोनासँग जुध्न योग – Merokhushi
कोरोनासँग जुध्न योग
योग गर्दा शरीरको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढेर कोरोना भाइरससँग लड्न मद्दत गर्छ भने संंक्रमितले योगाभ्यास गर्दा रोगबाट छिटो निको हुने सम्भावना हुन्छ
मेरो खुसी । १० जेष्ठ, २०७७ शनिबार १०:२५ मा प्रकाशित
नजानेर, महत्व नबुझेर वा व्यस्त जीवनशैलीका कारण हामी योग र ध्यान गर्न समय दिन सकिरहेका छैनौं । योेग–ध्यान, प्राणायाम त हाम्रो जीवन पद्दतीको अभिन्न पाटो नै हो । नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणबाट जोगिन हामी अहिले होम क्वारेन्टाइनमा छौं । कोरोनाबाट जोगिनका लागि रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिन्छ । त्यसका लागि हामी योगबाट दैनिकी सुरु गर्र्नसक्छौं । मेरो खुसी डट कमले योग, ध्यान, प्राणायाम र त्यसको फाइदाबारे जानकारी दिँदै जानेछ । – सम्पादक
लेखक : डा. आस्था पुडासैनी
संस्कृत शब्द योग ‘युज’ धातुबाट बनेको छ । जसको अर्थ जोड्नु भन्ने हुन्छ । महर्षि पतञ्जलीका अनुसार चित्तका वृत्तिको निरोध नै योग हो । हाम्रा मनमा अनेक प्रकारका राम्रा नराम्रा वृत्तिहरु उत्पत्ति र लय भइरहेका हुन्छन् । योगले अस्थिर मनलाई स्थिर बनाएर मानिसको शरीरभित्र रहेका रोगलाई निरोध गर्छ ।
योगको ज्ञान पाँच हजार वर्षदेखि अस्तित्वमा छ । सनातन धर्म वा हिन्दुद्वारा मानवलाई दिएको सबैभन्दा अनमोल उपहार नै योग हो । सबैलाई थाहा छ, योगमा शारीरिक आसनहरू हुन्छन् । यसरी आसन गर्नुलाई कतिले व्यायामको रुपमा मात्र बुझ्छन् । तर योगले त शरीरलाई मन र स्वाससँग जोड्ने काम गर्छ । योगमा आसानका साथै स्वासको व्यायाम वा प्राणायाम, ध्यान र विभिन्न अन्य ज्ञान पनि समावेश हुन्छन् । अब आफैले विचार गर्नुहोस्, यो पाँच हजार वर्ष पूरानो ज्ञान, आजको संसारमा कसरी सान्दर्भिक छ होला ?
योगले हाम्रो सम्पूर्ण शरीरलाई आराम दिन्छ । शरीरलाई उर्जा (शक्ति) प्रदान गर्छ । त्यत्ति मात्र होइन, योगका त फाइदै फाइदाहरू छन् । जुन तपाईंले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न ।
– शारीरिक तन्दुरुस्ती
– वजन घटाउने
– भित्री शान्ति (मनको शान्ति)
– चिन्ता मुक्त
– रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बृद्धि
– राम्रो सम्बन्ध र राम्रो सामाजिक जीवन
– ऊर्जा बृद्धि
– अंतर्ज्ञानमा बृद्धि
आजको व्यस्त जीवनशैलीमा संसारमा कसलाई योगका लाभको आवश्यकता छैन र ? योगबाट रोग मुक्त शरीर, तनाव मुक्त मन, आघात मुक्त चित्त निकै महत्वपूर्ण कुरा हो । तर, हामी कसरी यो हासिल गर्छौं ? हामीले यसलाई कहिले पनि सिकेनौं ? हामीले धेरै पुस्तकका ज्ञान सिकेका छौं । हामीले यो ज्ञान प्राप्त गर्न धेरै जीवन र समय खर्च ग¥यौं । दशकौं बित्यो तर मनलाई शान्त पार्ने, तनावमुक्त बन्ने जस्ता जीवन कौशल कुराहरू हामीले कहिले पनि सिकेनौं । आजको परिवर्तनशील संसारमा विश्वका धेरै भन्दा धेरै मानिसहरू शान्त मन र तनावमुक्त जीवनको खोजीमा छन् । यसलाई प्राप्त गर्ने सर्वोत्तम उपाय योग हो ।
कोरोना र योग
विश्वभर अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारी छ । यस्तो बेलामा आममानिसमा दुई किसिमको समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्, शारीरिक र मानसिक । शारीरिक रूपमा यदि कोही कोरोना संक्रमित हुन्छ भने योगले के भूमिका खेल्नसक्छ, कोरोना संक्रमण हुनुअघि र संक्रमित भैसकेपछि ? हरेक दिन योग गर्दा हाम्रो शरीरको रोगप्रतिरोधक क्षमता प्रणाली बढ्छ जुन भाइरससँग लड्न मद्दत गर्दछ । तसर्थ, यदि कसैलाई कोरोना भाइरस छ र यदि हामी तिनीहरूसँग खुलासा (आमने सामने) हुन्छौं भने, योगासन नगर्नेहरूको तुलनामा दैनिक योग अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरूमा छिटो स्वस्थ हुने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यस्तै, यो सामान्य ज्ञान हो कि तनावले रोगप्रतिरोधात्मक शक्तिलाई कमजोर बनाउँछ । योगाभ्यासले तनावमुक्त बनाएर अन्ततः शारीरिक रुपमा बलियो बनाउँछ अर्थात व्यक्ति मानसिक रुपमा शक्तिशाली हुन्छ ।
लकडाउनका कारण हामी घरमा सिमित भएका छौं । अब के हुन हो ? कोरोना महामारीसँग कहिलेसम्म सामना गर्नुपर्ने हो भन्ने अनिश्चितताले मानसिक तनाव, बेचैनी र चिन्ता बढेको छ । त्यस्तो अवस्थामा योगले तनावमुक्ति, सकारात्मकता तथा मनमा दृढ आन्तरिक शान्तिले बच्ने उपाय दिन्छ । त्यस्तै, वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट पनि हेरौं । विभिन्न मुलुकहरुमा गरिएको अनुसान्धनले नियमित योगभ्यास गर्ना निम्न फाइदा हुने पुष्टि गरेको छ :
– कोर्टीसोल (तनाब सूचक हर्मन) घट्ने
– रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ्ने
– सकारात्मक सोच बढ्ने
– मस्तिष्कको क्षमता बढ्ने (शान्ति र एकाग्रता)
– लिपिड प्रोफाइल (रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रमा) सुधार आउने
– एन्टी अक्सिडेन्ट बढ्ने (कोशिकहरुलाई फ्री -याडिकलको हानीबाट बचाउँछ
– मस्तिस्कको ग्रे म्याटर बढ्ने (६ महिनासम्म नियमित ध्यान गरेपछि)
(साभार : www.aolresearch.org)
आजको यस द्रूत गतिको जीवनशैलीमा रोगमुक्त शरीर, तनावमुक्त मन, आन्तारिक शान्ति, सुमधुर आपसी सम्बन्धका लागि नियमित योगाभ्यास अत्यन्तै जरुरी छ । आफूसँग भएको समयलाई अझ उत्पादकमूलक बनाउन र जीवनमा सच्चा सफलता (पेशा, मन र सम्बन्धमा सफलता) को निम्ति जीवनशैलीमा योग समावेश गर्न सकेका जीवनले नयाँ खुसीको बाटो समात्ने निश्चित देखिन्छ ।
(लेखक डा. पुडासैनीले वीपी.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबाट एमबीबीएस गर्नु भएको छ । मास्टर्स इन अस्टियोपेथी (एसएसयू उडिसा, इन्डिया) को फाइनल इयरका विद्यार्थी उहाँ द आर्ट अफ लिभिङको योग प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ ।)
चार महिने तालिमपछि ३१ योगगुरु दीक्षित
विद्यार्थीलाई ‘होमवर्क’को सट्टा ‘हाउसवर्क’बारे लेख्न लगाऔं : वैज्ञानिक मदन राई
पाठ्यक्रममा योग शिक्षा राखौं : प्रधानमन्त्री ओली
यी हुन्, कोरोना कालमा बाँच्ने ११ सुत्र
कोरोना जित्ने अस्त्र : मनोबल र सकारात्मक सोच
कोरोना जितेकी ८४ वर्षीया सेन भन्छिन्, ‘नडराउनुस्, निको हुँदो रहेछ’